काभ्रेमा ७५% कोरोना संक्रमित निको भए – Radio Roshi
काभ्रेमा ७५% कोरोना संक्रमित निको भए
in रोशी खबर / समाचार / स्वास्थ्य — by Roshikhabar —	June 3, 2021
यश कुमार परियार–जेठ २०,
काभ्रे जिल्लामा पछिल्ला दिन कोरोना संक्रमित थपिने भन्दा निको हुने दर बढेको छ । पछिल्ला दिनमा जिल्लामा नयाँ संक्रमित थपिनेको संख्या कम भएको स्वास्थ्य कार्यलय काभ्रेले जनाएको छ । कार्यलयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. नरेन्द्र कुमार झाका अनुसार हाल सम्म जिल्लामा ७५.४८ प्रतिशत संक्रमित निको भएका छन् ।
हाल सम्म जिल्लामा ९ हजार ४ सय ६७ जना कोरोनाबाट संक्रमित भईसकेका छन् । त्यस मध्ये ७ हजार १ सय ४६ जना निको भईसकेको कार्यलयको तथ्याङ्क छ । गत एक हप्ताको तथ्याङ्क हेर्दा नयाँ थपिने संक्रमित भन्दा २३.८९ प्रतिशत निको भएका छन् । हाल जिल्लामा २ हजार १ सय ८३ सक्रिय संक्रमित छन् भने अन्य जिल्लाका ५६ सहित १ सय ९४ जनाको मृत्यु भईसकेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा १८२ जना निको भए, १५१ मा कोरोना पुष्टि:
पछिल्लो २४ घण्टामा जिल्लाका १८२ जना कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणलाई जित्दै निको भएका छन् । भने थप १५१ जना नयाँ कोरोनाका संक्रमित थपिएका छन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. नरेन्द्रकुमार झाका अनुसार पिसिआर परिक्षणबाट ११७ जना र एन्टीजेन परिक्षणबाट ३४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
पिसिआर परिक्षणबाट जिल्लामा थपिएका मध्ये बनेपा नगरपालिकामा ३७ जना, मण्डनदेउपुरमा २६ जना, धुलिखेलमा २४ जना, नमोबुद्धमा १४ जना, पाँचखालमा ५ जना र पनौतीमा ३ जना रहका छन् । चौरीदेउराली गाउँपालिमा ५ जना, भुम्लुमा २ जना, रोशीमा १ जना गरी १५१ जना संक्रमित थपिएका हुन् । यसैगरी एन्टीजेन परिक्षणबाट पनौतीमा २२ जना, चौरीदेउराली गाउँपालिमा ७ जना, बनेपामा ४, तेमालामा १ जना गरी ३४ जनालाई संक्रमण देखिएको हो ।
काभ्रेमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ३ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा काभ्रे चौरीदेउराली गाउँपालिकाका ५२ वर्षीय पुरुषको ओम अस्पताल काठमाडौंमा, तेमाल गाउँपालिकाका ७७ वर्षीय पुरुषको एभरेस्ट अस्पताल र रामेछापका ६० वर्षीय पुरुषको धुलिखेल अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।